Ny Motorola One Action dia amidy any Espana | Androidsis
Ny Motorola One Action dia natomboka tany Espana
Ny Motorola One Action dia telefaona fahatelo an'ny marika hampiasana Android One, natolotra herinandro vitsivitsy lasa izay. Manome ity karazan-telefaona ity vokatra tsara ho an'ny orinasa, noho izany dia mikasa ny handefa modely vaovao ao anatiny izy ireo. Ity modely vaovao ity, ny faharoa avelany antsika amin'ity taona ity, dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy any Espana.
Miatrika telefaona misongadina amin'ny fakan-tsariny any aoriana isika, anisan'izany mihaona fakan-tsary izahay. Ka azontsika jerena fa ity Motorola One Action ity dia manolotra zavatra hafa amin'ny tsena. Tsy isalasalana fa zavatra iray izay mahatonga azy io ho safidy mahaliana ny mpampiasa maro.
Azo vidiana amin'ny fomba ofisialy any Espana izao ny telefaona. Efa natomboka tamina magazay izany, na amin'ny Internet, na amin'ny magazay ara-batana. Hahafahantsika mividy ny Motorola One Action amin'ny fivarotana toa an'i Amazon, MediaMarkt, FNAC na El Corte Inglés ankoatry ny maro hafa. Tsy hanan-java-manahirana ianao amin'ny resaka fitadiavana an'io eo afovoany amin'ny magazay.
Ny fitaovana dia natomboka tamin'ny loko roa, izay efa hitantsika tamin'ny fampisehoana azy, izay manga sy fotsy. Tonga ihany koa izy io kinova tokana amin'ny resaka RAM sy fitehirizana, izay 4/128 GB. Ka tsy manana safidy hafa hisafidianana isika amin'io lafiny io.
Ny vidin'ity Motorola One Action any Espana ity dia 279 euro. Mijanona ho vidiny tsara eo afovoan'ny elanelam-potoana amin'ny Android, ankoatry ny fananana vidiny ambany noho izay ny Fahitana Iray dia, izay efa amidy nandritra ny roa volana tany Espana koa. Na dia zavatra nandrasana hitranga aza izany.
Noho izany, ireo mpampiasa izay liana amin'ny fividianana ny Motorola One Action, azon'izy ireo atao izany amin'ny fomba ofisialy izao. Ity elanelam-bidin'ny marika ity dia efa natomboka tany Espana ary misy izao. Finday iray izay mety ho tianao be dia be, noho ny fisian'ilay fakantsary mihetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Motorola One Action dia natomboka tany Espana
Redmi dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny fahitalaviany voalohany
Ny Huawei MediaPad T5 dia mahazo ny loko vaovao Mist Blue